Progressive Stampings - China Qidi Plastic Isikhunta
Wokushaya Progressive kuyinto ngensimbi indlela ezingaba encompass isibhakela , ukwakhiwa , eguqa futhi ezinye izindlela eziningana ukulungisa metal impahla eluhlaza, kuhlangene i othomathikhi zinesimiso sokudla.
Uhlelo yokudla odlulela isiqeshana metal (njengoba unrolls kusuka ikhoyili) ngokusebenzisa zonke iziteshi of intuthuko wokushaya die. Esiteshini ngamunye haya ingoma eyodwa noma ngaphezulu imisebenzi kuze kube siphelile ingxenye senziwa. Isiteshi yokugcina kuwumsebenzi cutoff, ohlukanisa ingxenye siphelile kusuka kuwebhu ethwele. Iwebhu ekuthwaleni, kanye metal ukuthi ngesibhakela away imisebenzi langaphambilini, lithathwa njengenye Scrap Metal . Bobabili banqamula, abhidliza (noma aphume kufa) bese ukhiphe kusuka isethi die, futhi ekukhiqizweni zivame idluliselwe Scrap imigqomo nge Scrap komhlaba impahla elihambayo amabhande.
I okuqhubekayo wokushaya die ibekwe ibe reciprocating nginyathela cindezela . Njengoba cindezela ihamba phezulu, die phezulu ihamba naso, elivumela impahla ukondla. Lapho cindezela wehlela, die ulivala owenza lo msebenzi wokushaya. Nge-stroke press ngamunye, ingxenye igcwaliswe esuswa lidayizi.
Njengoba umsebenzi ezengeziwe kwenziwa "esiteshini" ngamunye die, kubalulekile ukuthi strip kumele isihambile ngokunembile kakhulu ukuze iqondanisa ngaphakathi thousandths ambalwa ngamasentimitha njengoba ihamba kusukela esiteshini esiteshini. Inhlamvu emise noma "pilot" oyindilinga ufake izimbobo round abamhlaba ngaphambili strip ukuze ngiqinisekisa ukuqondanisa kusukela indlela yokudla ngokuvamile abakwazi ukunikeza ngokunemba kudingekile ekuphakeleni obuphelele.
Wokushaya Progressive kungabuye kukhiqizwa emishinini yokudlulisa. Lawa ukucindezela ukuthi uthumele izingxenye komunye esiteshini olandelayo nokusetshenziswa "iminwe" lokukhanda. Ukuze ekukhiqizweni izingxenye wanyathela okuyinto musa kudinga nzima e-cindezela imisebenzi, kuba njalo kuhle ukusebenzisa wokunyathelisa ezithuthukayo. Omunye izinzuzo lolu hlobo cindezela yisikhathi umjikelezo ukukhiqiza. Kuye naphezu kwengxenye, imikhiqizo kalula ukusebenzisa izingxenye ezingaphezu kuka-800 / umzuzu. Omunye nemibi lolu hlobo cindezela ukuthi asifanele ngokunemba high umdwebo ezijulile okuyinto lapho wokushaya ukujula idlula ububanzi engxenyeni. Lapho kudingekile, le nqubo wenziwa phezu cindezela ukudluliswa, okuyinto ukusebenzisa ngesivinini kancane, futhi ancike iminwe mechanical kuya ubambe ingxenye kuzokwenzeka hlangana naso soke umjikelezo obumba. Endabeni nabezindaba lesichubekako, kuphela ingxenye umjikelezo ukwakha engaqondiswa entwasahlobo ukulayishwa imikhono noma efanayo, okuyinto nomphumela concentricity futhi ovality nezindaba nokungezona iyunifomu ukujiya impahla. Okunye nemibi ukucindezela okuqhubekayo kuqhathaniswa ukuze uthumele imishini: kukhuphuke impahla eluhlaza okokufaka edingekayo ukuze uthumele izingxenye, amathuluzi ezibizayo okuningi ngoba wenza ngamabhulogi Kuncane kakhulu isiqondiso ezimele esiteshini ngayinye; engenakwenzeka ukwenza izinqubo cindezela okudinga ingxenye ukushiya strip (isibonelo beading, necking, flange curling, intambo rolling , rotary wokushaya njll).
Dies kuvame eyenziwe ithuluzi lensimbi ukumelana ukulayisha ukushaqeka okusezingeni eliphezulu abathintekayo, kubuyise kudingekile abukhali ahlabayo onqenqemeni, futhi simelane olwalwenza amabutho abathintekayo.
Izindleko kunqunywa inani izici, enquma ukuthi tooling uzodinga isetshenziswe. Kutuswa ukugcina izici kulula ngangokunokwenzeka ukugcina izindleko tooling esiphansi. Izici ukuthi isondelene ukukhiqiza inkinga ngoba kungenzeka ukunikeza imvume eyanele Punch, okungase kuholele ekungasebenzini enye esiteshini. Kungaba yinkinga ukuba ukusikeka emincane futhi zeziboya.
Isibonelo esihle kakhulu umkhiqizo die okuqhubekayo iyona Simbonyo isiphuzo ikani . Ithebhu silingo senziwa kwelinye okuqhubekayo wokushaya inqubo kanye isivalo & umhlangano wenziwe kwenye, ithebhu silingo kanyekanye ukusuthisa engela ngqo isivalo & inhlangano inqubo.